Kooxda Barcelona oo ka fiirsaneysa inay la soo wareegto Cristiano Ronaldo… (Messi iyo CR7 oo ku midoobi kara Barca) – Gool FM
(Barcelona) 22 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay ka fiirsanayso inay la soo wareegto Weeraryahanka Naadiga Juventus ee Cristiano Ronaldo.
Madaxweynaha dhowaan dib loo doortay ee kooxda Barcelona, Joan Laporta ayaa hammigiisa ugu weyn ka dhigtay xagaagan saxiixa Cristiano Ronaldo.
Laporta oo dhawaan loo magacaabay xilka madaxweynaha Barcelona ayaa doonaya inuu mowjado ka sameeyo suuqa kala iibsiga xiddigaha, isagoo kooxdiisa isugu keenaya Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi.
Sida ay warinayso Jariiradda AS ee ka soo baxda dalka Spain, Laporta ayaa diyaar u ah inuu in ka badan hal ciyaaryahan oo Barcelona ah u soo bandhigo Juventus si uu u keento Ronaldo garoonka Camp Nou; waxaana xiddigaha dhinaca Juve ay Barca u direyso la tilmaamayaa inay ka mid yihiin Antoine Griezmann, Philippe Coutinho iyo Sergi Roberto.
36-sano jirkaan Ronaldo ayaa la la xiriirinayaa inuu ka dhaqaaqi doono Juventus xagaagan kaddib markii ay kooxdiisa Juventus ku dhammaysatay kaalinta afaraad ee horyaalka Serie A, isla markaana ay niyad-jab kala kulmeen Champions League.
Xiddiga shanta goor ku guuleystay abaal-marinta horyaalka Premier League ayaa sagaal sanadood ku qaatay kooxda ay Blaugrana xafiiltamaan ee Real Madrid ka hor inta uusan u dhaqaaqin Juventus sanadkii 2018-kii.